Srilanka oo culeesyo kusoo rogtay Muslimiinta ku nool wadankaas. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Srilanka oo culeesyo kusoo rogtay Muslimiinta ku nool wadankaas.
On May 11, 2019 297 0
Wadanka Srilanka waxa uu kamid yahay wadamada dhaca qaaradda Asia, ee ay kunoolyihiin muslimiinta tirada yar marka loo eego buudiyiinta iyo Nasaarada ku nool wadankaas, waxaana Muslimiintu ay la kulmayaan cadaadis dhinacyo badna leh.
Dowladda Srilanka ayaa soo saartay wareegto ay ku fareyso A’imada masaajida muslimiinta iney soo gudbiyaan khudbadaha diiniga ah ee ay ka jeedinayaan masaajidda, marka la gaaro maalinta Jimcaha.
War kasoo baxay wasaaradda qaabilsan arimaha diinta ayaa lagu sheegay in Masaajidda ay noqdeen goobo laga faafiyo waxay ugu yeereen xagjirnimada iyo naceybka, iyagoona taas bedelkeeda soo saaray amar ah in dowladdu ay tifaftirto khudbadaha kahor inta aan la gaarin maalinta Jimcaha.
Sirilanka waxay sidoo kale dalkeeda ka musaafurisey kudhawaad 200 oo daaci oo kamid ah ducaada diinta ku faafinayay wadankaas, kuwaas oo ay ku eedeysay iney wateen fiisooyin dhacay, balse waxay dadka muslimiinta ah sheegayaan in dowladdu ay ka carootey sida culimadaas ay diinta u faafiyaan.
Wadanka waxaa kunool muslimiin tira yar oo u dhigan 10% tirada guud ee dadka ku nool Srilanka,waxaana ay muslimiintu la kulmaan tacadiyaad kala duwan oo jihooyin kala duwan ka imaanaya.
Dhawaan, dowladda Srilanka waxay wareegto ay soo saartay ku mamnuucday in gebi ahaanba gabdhaha muslimaadka ah ay xirtaan niqaabka sharciga ah, waxaana gabadhii lagu arko loogu hanjabay in la kulmeyso tallaabooyin adag oo ka imaaneysa dhinaca dowladda.
Xilliga lagu guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah waqti ay inbadan kheyrka ku mashquulaan mulsimiinta, masaajidana aad loo soo camiro ayaa hadda waxaa Srilanka laga dareemayaa isbedel muuqda, sababo ku aadan ciidamada Amaanka oo ilaalinaya masaajidda, si gaar ahna u calaamadeysanaya qofkii salaadaha Jamaacaadka ku ilaaliya.
Dhibkan iyo culeeskan ay dareemayaan muslimiinta Srilanka ma ahan arin ay keligood ku yihiin, balse waxaa la qaba muslimiinta kunool wadamada iyo dhulalka looga tirada badanyahay, ama xooga looga heysto, waxaana kamid ah Turkistaanta bari, Afrikada dhexe, Kashmiir, iyo meelo kale oo aad u badan.